Maxay ka wada hadleen Musharaxiinta iyo Ergeyga Qatar? - Jowhar somali news leader
Home NEWS Maxay ka wada hadleen Musharaxiinta iyo Ergeyga Qatar?
Maxay ka wada hadleen Musharaxiinta iyo Ergeyga Qatar?
Ilo xog-ogaal ah ayaa nala wadaagay in Xubnaha ka socday midowga musharaxiinta oo ay ka mid yihiin Xasan Sheekh Maxamud, Xildhibaan C/qaadir Cosoble, Xasan Cali Kheyre iyo C/raxmaan C/shakuur Warsame ay kulan gaar ah la qaatay Ergeyga gaarka ah ee Wasaaradda Arrimaha dibadda ee Qatar Dr. Mutlaq Al-Qahtani.
Dawlada Qatar ayaa u muuqata in ay ka guurtay Farmaajo, baadigoobna ugu jirta xulufaysi siyaasadeed oo hor leh.
Previous articleSafiirka Midowga Yurub oo ku baaqay in Ciidamada Milatariga laga saaro Muqdisho
Next articleBurkina Faso attack: Bodies of killed Spanish and Irish nationals return